Pushbullet: साझा कलहरू, अधिसूचनाहरू र मिडिया
ईमेल र मेसेजिङ वीओआईपी
कलहरू प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईंको पीसीमा सन्देशहरूमा जवाफ दिनुहोस्
यो ती अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले अस्तित्वमा राख्नुभएन जबसम्म तपाइँले ठोकुन्जेल सम्म अस्तित्व प्राप्त गर्नुभयो र यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ। आईओएस प्रयोगकर्ताले उनीहरूको आईफोन र उनीहरूको म्याकको कम्प्युटरहरू बीचको एक अनुप्रयोगको माध्यमबाट निरन्तरता दिन, उनीहरूको कलहरू र अधिसूचनाहरू साझेदारी गर्न सक्थे, जुन अझै पनि एन्ड्रोईड प्रयोगकर्ताहरूका लागि चालक थियो। त्यहाँ AirDroid थियो, जसलाई अनुमति दिइएको एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको स्मार्टफोन र उनीहरूको पीसी बीच फाइलहरू जडान गर्न र साझेदारी गर्न। तर पुष्ब्लेले पट्टीलाई पछाडि सादा बनाउँछ। यसले तपाईंको मोबाइल उपकरण र कम्प्युटरको बीच कलहरू, अधिसूचनाहरू र यहाँका फाइलहरू साझेदारी गर्न सजिलो बनाउँछ। यसले वीओआईपी अनुप्रयोगहरूको लागि अझ राम्रो काम गर्दछ जुन मोबाइल फोनका लागि हो र कम्प्युटरको लागि संस्करण छैन।
सेट अप र प्रयोग गर्न धेरै सरल। चीजहरू स्वचालित रूपमा सेट भए पछि, वा दुई माउस क्लिकहरू वा छुनुहोस्।
पूर्ण रूपमा निःशुल्क
लिनक्स र ब्ल्याकबेरी सहित सबै सामान्य प्लेटफार्महरूमा कार्य गर्दछ। ब्राउजरहरूसँग प्लग-इनको रूपमा पनि कार्य गर्दछ।
कम्प्यूटरबाट र कम्प्युटरबाट निर्मम साझेदारीको अनुमति दिन्छ।
आगमन कल र सन्देशहरूको तत्काल साझेदारी, साथसाथै स्मार्टफोनमा अन्य सूचनाहरू, धक्का सूचना मार्फत।
फाइलहरू 25 एमबी भन्दा बढी हुन सक्दैनन्।
एक पटक मात्र एक फाइल पठाउन सकिन्छ।
किन एउटा अनुप्रयोगलाई पुर्बलेटले आवश्यक पर्दछ? अधिकांश मानिसहरूले यसलाई यसको स्मार्टफोन र तपाईंको कम्प्यूटर बीच फाइलहरू निर्बाध रूपमा साझेदारी गर्ने क्षमताको प्रयोग गर्छन्। USB केबल प्लग गर्न वा वाइफाइमा विज्ञापन-होक नेटवर्क सेट अप गर्नु भन्दा ब्लुटुथ वा यहाँ ब्लूटूथ प्रयास गर्न सजिलो छ। दुई क्लिकहरू वा दुई छुटहरूसँग, फाइल हस्तान्तरण गरिएको छ।
यहाँ अर्को कारणले पुशबलिबल हो। यसले तपाईंको फोनमा तपाइँको कम्प्युटरमा भइरहेको घटनाहरू धक्का गर्नको लागि धक्का सूचना प्रयोग गर्दछ, यसैले तपाईंको कलहरू र अन्य प्रकारको सूचना साझेदारी गर्न। उदाहरणका लागि, तपाईंसँग तपाइँको कम्प्यूटरमा फोन कल र साथै तपाईंको फोनमा बजाउँदछ। यस तरिकाले, जब तपाईं आफ्नो फोनबाट टाढा हुनुहुन्छ र तपाइँको कम्प्युटरमा काम गर्दा तपाईं कल र सन्देशहरू सम्झनु हुनेछैन। तपाईंले एप्सबाट पनि अधिसूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तै, तपाईंले स्काइप, भिबर , व्हाट्सएप वा फेसबुक मैसेन्जर र नयाँ अलर्टमा नयाँ सन्देश पाउनुभयो।
तपाइँ पनि तपाइँको पीसी बाट लिङ्कहरू हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले सम्म, मान्छे आफैले फाईलहरू र लिङ्कहरू इमेल गर्न प्रयोग गर्थे, जबसम्म तिनीहरू सम्पूर्ण सामानहरू पुन: टाइप गर्न चाहँदैनन्।
दुवै पक्षमा इन्टरफेस धेरै सरल छ। एक एन्ड्रोइड फोन, यो वास्तवमा एक इन्टरफेस हुनु आवश्यक छैन जबसम्म तपाईं लिङ्क साझेदारी वा पाठ वा फाइलको टुक्रा जस्तै केहि ट्रिगर गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसोभए, एपको इन्फेसेसन अत्यन्त कम छ वा यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने खाली छ। यदि तपाईं एक ट्राफिक सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने एक + चिन्हलाई छुनुहोस्। हुनसक्छ, अधिकांश अनुप्रयोगको कामले अधिसूचनाहरू र घटनाहरूका लागि पृष्ठभूमिमा सुन्नु र तिनीहरूलाई अर्को यन्त्रमा पुर्याउन समावेश गर्दछ। कागजात साझा गर्न वा उदाहरणको रुपमा एक तस्वीर भन्नुहोस्, तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणबाट तपाइँको पीसीबाट, तपाइँ यसलाई फाईल एक्सप्लोरर, ग्यालेरी, क्यामेरा वा कुनै पनि अनुप्रयोगबाट साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँले साझेदारी साझेदारीको साथ फाइललाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए, जब तपाइँ आफ्नो तस्वीरमा साझेदारी विकल्प चयन गर्नुहुन्छ, साझेदारी विकल्पहरूको सूचीले पुशबलेटमा शब्दहरूसँग एक नयाँ धक्का समावेश गर्दछ।
कम्प्यूटर साइडमा, प्रत्येक समय एक अधिसूचना हो, पप अप अप स्क्रिनको तल दाँया कुनामा उपयुक्त सन्देशको साथ देखिन्छ। तपाईंसँग तपाइँको पीसीमा कलहरू जवाफ दिनको लागि पनि सम्भावना छ, र सन्देशहरूको जवाफ दिनुहोस्। तपाईले फाईलहरू यसमा दायाँ क्लिक गरेर साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ र पक्काबटन विकल्प चयन गर्नुहोस् कि बक्समा, जुन सबै साझेदारीयोग्य फाइलहरूको मेनु विकल्पहरू समावेश गर्दछ। हुनसक्छ, तपाईं स्ट्यान्डअलो एप चलाएर वा ब्राउजरमा उपकरणपट्टीमा देखा पर्नुहुने बटन क्लिक गरेर वा अनुप्रयोगको लागि इन्फेसेसनलाई आगो लगाउन सक्नुहुन्छ।
Pushbullet मुख्य रूपमा एक अनुप्रयोग धक्का एक अधिसूचना हो, त्यसैले उन्नत फाइल र मिडिया साझेदारी क्षमताहरू आशा गर्दैन। यो तपाईंको मोबाइल भण्डारण उपकरण खोल्न र सामग्रीको सबै विवरणहरू भित्र, जस्तै कि अन्वेषक अन्वेषकहरू दिन सक्नुहुन्न। तपाईं केवल फोन र तपाईंको कम्प्युटर बीच फाईलहरू साझा गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो आफैमा एक ठूलो सहयोग हो।
तपाईंले पठाउन सक्ने फाइलहरू 25 MB भन्दा बढि आकार हुन सक्दैन। यो फोटोका लागि एक समस्या हुन सक्छ, तर ठूलो कागजातहरू पास हुनेछैनन्।
साथै यो एक समयमा धेरै फाईलहरूको साझेदारीको अनुमति दिँदैन। बहु फाइलहरू साझेदारी गर्दै तिनीहरूलाई समूहबद्ध गरेर जिप गरेर सम्भव छ र तिनीहरूलाई जिप गरिएको फाइलको रूपमा स्थानान्तरित गर्दछ।
तपाईं Google Play बाट आफ्नो Android फोनको लागि अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। स्थापना सरल छ र त्यहाँ कन्फिगरेसन छैन। तर तपाई कम से कम एक चोटि एप अप गर्न र सेटिङ्स मा एक नजर राख्नु पर्छ, यदि तपाईंलाई साझेदारी सक्षम गर्न एक वा दुई विकल्प जाँच गर्न आवश्यक छ।
तपाईंको कम्प्यूटरमा, तपाईंले कार्यक्रमको स्ट्यान्डअलोन संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको आवश्यकता छ .नेट फ्रेमवर्क 4.5, जुन धेरै विन्डोज7मिसिनहरूमा उपलब्ध छैन। यदि यो मामला हो भने, यो स्वचालित रूपमा डाउनलोड र स्थापना हुनेछ, तर यसले केही समय लिन सक्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाइँ यसलाई ब्राउजरको लागि प्लग-इनको रूपमा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्न, Pushbullet मुख्य वेब पृष्ठमा जानुहोस् र ब्राउजरको सूचीबाट चलिरहेको ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। बाँकी कुनै अन्य ब्राउजर एक्सटेन्सनको लागि जस्तै हो।
जब तपाइँ केहि चीज साझा गर्नुहुन्छ, प्राप्तकर्ता सूचीमा दिइएको छ, जुन तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको यन्त्रहरूको नाममा आबद्ध छ। कम्प्यूटरको लागि पहिचानकर्ताको रूपमा, यसले प्रयोग गरिरहनु भएको ब्राउजरको नाम प्रयोग गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँ आफ्नो स्मार्टफोनबाट तपाईंको कम्प्यूटरमा केहि पठाउन चाहानुहुन्छ जुन ब्राउजरको रूपमा क्रोम चलाउनुहुन्छ, तपाइँ प्राप्तकर्ताको रूपमा क्रोम चयन गर्नुहुनेछ।
यो कसरी लिंक बनाउँछ? तपाईंको Google वा फेसबुक खाता मार्फत। अब, धेरै मानिसहरू जस्तै, तपाईंले पहिले नै र स्थायी रूपमा तपाईंको Google खातामा लग इन गर्नुहुनेछ (यो तपाईंको इमेल, गुगल प्ले आदि) वा फेसबुक खाताको लागि हो। तपाईं पनि आफ्नो Google वा फेसबुक खातामा लग इन गर्न आवश्यक छ र तपाईंको कम्प्यूटरमा रहेको छ।
व्हाट्सएप को पहिचान र असक्षम कसरी प्राप्त गर्ने सिक्नुहोस् पढ्नुहोस्
वीओआईपी स्टन्ट - नि: शुल्क कलहरू चयन गरिएका गन्तव्यहरूमा
गुगल भ्वाइस के हो?
तपाइँको कम्प्यूटरमा एन्ड्रोइड चलाउनुहोस्
KakaoTalk नि: शुल्क कलिंग र सन्देश सन्देश अनुप्रयोग समीक्षा
याहू मेसेन्जरको आवाज कलिंग सेवा
शीर्ष वीओआईपी हेडसेटहरू
जीमेल कलिङ पुनरावलोकन - गुगल अन्तर्राष्ट्रिय कलिंग
क्लाउड र मोबाइल उपकरण सुरक्षा: 2016 को लागि चुनौती
अनुकूलन समानांतर डेस्कटप - समानांतर अतिथि ओएस अनुकूलन
8 लुकेका iPad गोपहरू जसले तपाईंलाई प्रोमा परिणत गर्नेछ
एलटीई (लम्बाई अवधि विकास) परिभाषा
एक तारको क्यालोरी के हो?
कसरी पुनःप्राप्त वा ओपेरा मेल आयात गर्नुहोस् ब्याकअपबाट
म्याक ओएस एक्समा उपनामहरू, प्रतीक लिंकहरू र हार्ड लिङ्कहरू के हुन्?
काउन्टर हैक पुनःलोड गरिएको
क्रोन्डरमा नि: शुल्क पीसी खेल
पोष्ट रोक्न, फ्रिज गर्दै, र पोष्ट समस्याहरू पोस्ट गर्नुहोस्
आईप्याडमा सर्वश्रेष्ठ साहसिक खेलहरू
वेब डिजाईनमा "गर्भपात हटाउने" के हो?
आईप्याडमा कसरी 'मेमोरी' फोटो स्लाइडशो सिर्जना गर्ने
2018 मा कर्ड कटरको लागि खरिद गर्ने 10 उत्तम उपहारहरू
Pokemon GO, र किन मिक्स गरिएको वास्तविकता अझै पनि अनिश्चित छ
25 उत्तम नि: शुल्क आईफोन अनुप्रयोगहरू
हर्ट्ज (हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगा) वायरलेस संचारमा
Nyrius Aries प्रधान समीक्षा
IPad आमाबाबुको मूल्याङ्कनबाट iPad सामग्री कसरी सीमित गर्ने
भिजुअल भ्वाइसमेल के हो?
PS3 कन्सोल र सहायक उपकरण छविहरू
एचआरयूले के गर्छ?